Cishe azikho izindawo owesifazane osebenza makeup ngaphandle uhlaka kokuthona, ukwazi ukwemboza hhayi kuphela ukungapheleli encane isikhumba lanjengeliphimbo engalingani, imibuthano phambi kwamehlo kusuka ukukhathala, kodwa futhi ububomvu ngempela okuqaphelekayo, imibimbi, induna. Concealer yokucasha ukungapheleli, futhi kungonakalisa wonke isithombe, uma ithoni is wacosha ngokungalungile noma ukuxazulula isicelo unprofessionally. Futhi, ukhilimu kungase kungabi quality enhle kakhulu, nakuba eqolo ngentengo. Indlela ukukhetha isisekelo esihle, efihla amaphutha? Izibuyekezo kwezimali ezibizayo mali, isilinganiso engcono imithetho ngokufaka isicelo isikhumba siye ekulesi sihloko.
Izinhlobo okhilimu kokuthona
Izikhwama akuzona kuphela umsuka kanye intengo, kodwa nesokuthi zonke izimfanelo zayo: ukuthungwa, inani udayi izinhlayiya, umswakama, khona izingxenye ezengeziwe namavithamini. Kungenxa lezi zindlela, yilowo nalowo wesifazane ekhetha wakhe ngoba indlela ukhilimu. Cabangela izinhlobo ezinkulu izinsiza kokuthona:
isisekelo Liquid. Lona ephelele i kusihlwa ukwakheka, it is kahle evens isikhumba ithoni, okwenza ebusweni ngaphezulu bushelelezi zibukeke, Velvety. Leli thuluzi kufanelekile isikhumba evamile futhi inhlanganisela.
Mousse uyakwazi nasezinganeni out isikhumba ukuthungwa, kodwa ngokuphelele engenamsebenzi ukufihla amaphutha. Ifanele ukusetshenziswa nsuku zonke. Ngenxa ifomula isisindo akusho clog pores, Kungcono kakhulu avuthiwe, okunamafutha kanye isikhumba oily.
Cream powder iyithuluzi ozithandayo abesifazane abaningi. Lokhu concealer matte ilungele ukufihla amaphutha ku isikhumba oily. Yena evens ithoni, aqede akhanye, uyazifihla ububomvu nezinduna. Yini embi ngalo leli thuluzi liphawuleka ukuchitheka yayo. Omunye amathuluzi ethandwa kakhulu lolu hlobo kuyisisekelo "Meybelin". Izibuyekezo ngakho sizokwenza bhala okuqukethwe esizayo isihloko.
Cream uketshezi kufanelekile isikhumba esomile, njengoba moisturizes kahle. Kuyinto enhle ukwakheka ku hot sezulu ehlobo. Ukuntula kwelinye ithuluzi - ukungakwazi gubadlela ngisho amaphutha amancane kakhulu, ngoba iqukethe eliningi ubuncane pigmenting izingxenye.
Sifihle Cream - ukutholakala sangempela kulabo ufuna ukuba isikhumba ephelele, kodwa akuyona. Sifihle is lenziwa okusekelwe amanzi-oxosha, it has a semali izingxenye toner. Ngokuphelele efihla zonke amaphutha, kuhlanganise induna, ububomvu, lesikhumba. Kushiywa munye - sisuswa kuphela ithuluzi ekhethekile.
Ukukhetha isisekelo esifanele
izinga ukwakheka incike uqondanise kahle izisekelo - isisekelo. Usizo lwabenza imisenenzi ukwakheka abaculi ukuncoma kukhethwa izindlela ukusebenzisa amasu neshaya amathiphu:
Khetha ithoni okhilimu kokuthona kufanele kuphela emini. Izibani kungahlanekezela umbala kwesikhumba futhi izindlela, nika yellowness noma mpunga.
Ukuze uzwisise ukuthi umbala ithoni efanelekayo kusho ukuthini ukuba ungqimba elincanyana isetshenziswa ingaphakathi isihlakala sakho, umthunzi ezinhle.
Kubalulekile futhi ngokuvamile yayiba nezinhlobo ezimbili isisekelo: imini kusihlwa izimonyo. Ngesikhathi sasemini, akudingekile ukusebenzisa izindlela nge ukuthungwa aminyene, khetha ukhilimu-uketshezi noma mousse, bona ahambelana kahle ithoni, kodwa musa ukufihla amaphutha. Esikhathini emini ukhilimu sifihle lizovela "imaski". Mousse asifanele kusihlwa ukwakheka, njengoba izibani kwenza evelele amaphutha isikhumba nakakhulu, ukuthungwa ayazika.
Kuye elamukelekile iwukukhetha futhi uhlobo izinsiza iphimbo. Ethandwa kakhulu namanje isisekelo ewuketshezi, njengoba kufanelekile yiluphi uhlobo isikhumba, efihla konke ukungapheleli esobala; Namathela asenze isikhumba esomile, aqede uyaxebuka; uthuli buso kukhanye.
Indlela yokufaka isicelo concealer ukufihla amaphutha?
Akuwona wonke ummeleli wobulili bubuhle kungaba ukuziqhayisa isikhumba ephelele. Amachashaza, uyaxebuka, ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe, kukhanye oily, ububomvu - lokhu akulona uhlu oluphelele ukungapheleli abesifazane, ngakho bazama ukuyifihla. Ukuze zibukeke ukwenza isikhumba enempilo xaxa futhi abushelelezi ngokwanele ukuba akhethe indlela kanye concealer ezinhle efihla ukungapheleli. ochwepheshe lezivakashi athi: kufanele silisebenzise kahle ukufeza umphumela oyifunayo.
Ngaphambi kokufaka isicelo isisekelo ezidingekayo ukuhlanza isikhumba, uma kudingeka sebenzisa i khuhla.
Isikhumba esomile noma ulwazi olubucayi ngaphambi kokufaka isicelo concealer kufanele moisten ukhilimu okunomsoco ukuze imibimbi noma engu akubi lubonakale zibukeke ngaphezulu.
ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe kungaba isisekelo ezifihliwe, lapho Ukwakheka has a abicah.
Shine fihla matte isisekelo, kufanelekile sabesifazane abangakaze imibimbi (nge kulokoza umphumela ukhilimu uyobenza kubonakale kakhulu).
Freckles angaluboni ngaphansi ungqimba ukhilimu nge nomphumela ukushuka. Kufanele sisebenzise ngokunyakaza isiyingi endaweni obala ukuze kungabonakali, bese umthunzi emathempelini, entanyeni ezungeze izindlebe.
Ububomvu, ukuqubuka kanye ukuvuvukala ngokuvamile kunzima ukufihla. Okuwugqinsi isisekelo kokuthona bayothola kuphela kusihlwa, asifanele emini izimonyo. Ochwepheshe ukweluleka ukuba agqoke mousse ubuso noma ukhilimu-uketshezi. Ukufihla ukungapheleli kwala mathuluzi, kufanele zisetshenziswe ezimbili zamatshe ukukhanya patting ukunyakaza futhi kalula nje.
Ukuze afihle imibimbi lokuqala ukusiza isisekelo amafutha, isicelo kumele kube ne ibhulashi ububanzi. Lokhu kuzokwenza ukukhulisa izenzo imaski ubudala.
Imithetho isicelo isisekelo
Ochwepheshe ukweluleka sokusebenzisa enze-up ukuthenga isibani sikagesi. Kuyokusiza kusihlwa phezu qualitatively isicelo makeup. Ithoni Cream kumele kusetshenziswe ngokucophelela ukuba bagweme "imaski umphumela", leli thuluzi esithathwayo izingxenyana ezincane kanye isiyingi ezinyakazayo deda ebusweni. Ukuze iphimbo kwakubonakala ikhambi lemvelo okumele asetshenziswe hhayi kuphela ebusweni kodwa futhi esikhumbeni isiphundu sabo decollete ndawo.
Ekuqaleni ukhilimu umthunzi ukuxegiselwa iphathwa izindawo isikhumba ezizungeze amehlo - ngaphansi ulayini amashiya nezinkophe aphansi. Ngemva kwalokho, ithoni eziyisisekelo lisetshenzisiwe T-zone, okuye kwasakazwa eminyakeni ebunzini, ekhaleni, izihlathi namathempeli. Imingcele akufanele kube, izoni ngayinye kufanele ukubopha ngokucophelela. Into yokugcina ukhilimu sisetshenziswa entanyeni nasesifubeni ndawo.
Foundation ukhilimu for isikhumba oily: Izibuyekezo
Abesifazane abaningi baye bazama angaphezu kweshumi nambili okhilimu ngaphambi kokukhetha lowo waya kahle njengakho konke zindlela. Sibukeze ukubuyekezwa cishe yonke okhilimu kanye tinting izakhiwo kanye uhlu the best. Lapha kukhona isabelomali kanye concealer efihla amaphutha kanye loans ezibizayo.
Ngokombono abesifazane kuyacaca ukuthi uma inkinga isikhumba, kuyafaneleka ngokucophelela ukukhetha izimonyo, ukuze singathwesi babhebhethekisa inkinga futhi kuze kufike ku fihla yayo.
Ithoni ukhilimu Dior yathanda abesifazane abaningi. Bhala ukuthi kuhle ubekwe isikhumba, hhayi nivame, idala ithoni esiphelele iveli mncane.
Bhala ukuthi a concealer ezinhle ngempela efihla ukungapheleli. Izibuyekezo bathi awusebenzi clog pores, kuyinto akwazi ukujwayela semvelo isikhumba tone.
Kukhona amarekhodi kusho moisturizes kahle isikhumba uwela ngokulinganayo ngaphandle kwemingcele. Mark kanye abanzi. Babhala ukuthi nge ezahlukene ezifana oluthandwa akuyona inkinga.
Ithoni ukhilimu Dior wakwazi ukuzuza kanye nebubi. Lo mbhalo uthi iphunga ezingemnandi utshwala, kodwa iphunga ngokushesha iphele. Kwaba khona futhi intengo ubude.
Ithoni Cream-uketshezi "Haze" kusukela "Iv Roshe"
"Haze" - isisekelo isikhumba oily. Izibuyekezo mayelana leli thuluzi ayatholakala izinto eziningi ezinkulu, njengoba bobabili abesifazane kanye nezinkinga zesikhumba futhi eyanele. Abanikazi isikhumba oily futhi inhlanganisela bathandile isisekelo "Iv Roshe" "Mat."
Bhala ukuthi kahle kufihla akhanye, elele ebusweni, sengathi oluyimpuphu. Ukuvumelana we esintekenteke, kancane lwamanzi, ngakho ukhilimu kwanele isikhathi eside.
Lo mbhalo uthi isisekelo "Iv Roshe" akusho clog pores esikhumbeni neze wazizwa, hhayi nivame.
Ngaphansi waqaphela ukuthi awusebenzi imaski amaphutha, kodwa kuphela evens isikhumba ithoni bese isusa bukhanye. Kodwa lapha uma kwakukhona abakhulekayo, bhala ukuthi lokhu ukhilimu-uketshezi, futhi kumelwe zisebenze gubadlela kwamaphutha in izingqimba ezimbili noma ezintathu.
Umugqa yezimonyo "Meybelin" nje ngokwanele ukuba ukhethe concealer kwesokudla efihla ukungapheleli. Izibuyekezo kule nkampani kanye izimonyo yayo cishe zonke ezinhle.
Abesifazane ukugubha Affinitone ukhilimu, Dream Fresh BB Cream, Dream Pure BB Cream nabanye abaningi.
Babhala ukuthi inkampani "Meybelin" kuyinto ozithandayo kanye izimonyo izinga ezingabizi futhi ehloniphekile.
Kunemibono ukuthi isisekelo BB "Meybelin" hhayi qualitatively kuphela kufihla amaphutha, Nokho, futhi has a ukuthungwa kunalokho obucayi ukukhanya, kodwa futhi uyasondla isikhumba. Bhala ukuthi umuntu ngaphansi wadalula izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba ukuqubuka, ububomvu yayiya.
Lo mbhalo uthi "Affiniton" kahle kufihla akhanye, umphumela powder. Musa desiccate umuntu angabi clog pores, hhayi nivame.
umkhiqizo Muhle akusho ibala izingubo, angena isikhumba ngokushesha, udela ncamashi, uyakwazi ukuzivumelanisa ithoni ubuso.
Ukugubha anhlobonhlobo, kusukela lapho wonke umuntu angakhetha umbala wakho.
Ithoni Cream "Meybelin" has Izibuyekezo omuhle kuphela. Abesifazane bhala ukuthi ezihlukahlukene izinsiza kokuthona ungase uthole kahle kwakhe. In the line kukhona okhilimu kanye ukuthungwa sasivumela obukhulu efanelekayo kusihlwa izimonyo.
Abaningi bathi isisekelo "Meybelin" has cishe akukho iphunga. Kukhona nje okuncane "powdery" ukunambitheka, futhi ukhuluma izinga okusezingeni eliphezulu.
Ukungabi khona inani elikhulu ngamakha ayikwazanga ukujabulisa abesifazane abanemizimba komzimba. Babhala ukuthi sha yezimonyo kuphela wakwazi ukuthola ithuluzi elilungile.
Ithoni Cream "Black Pearl" umise ngokwaso njengoba omunye the best in the isigaba isabelomali.
Abantu abaningi babhale ukuthi isikhathi eside ngenxa ngamanani aphansi kwakungafanele nitinikele ukuthenga, kodwa wazama kanye, wakhetha ukungahlukanisi ukuchitha imali owengeziwe izimali ezibizayo.
Girls uthi behlangabezana izimonyo "Black Pearl", bakwazi isikhathi eside, ngoba unina wenze belisebenzisa. Bhala ukuthi ngokushesha waqala ukuthenga bona imikhiqizo yalesi brand, kuhlanganise isisekelo. "Black Pearl" wakwazi ukujabulisa bonke abantu.
Kukhona Izibuyekezo kuleso sisekelo kahle efihla zonke amaphutha, kuhlanganise freckles, ubudala izindawo, ngaphansi iso imibuthano. Akukona clog pores, hhayi "ngoyisiwula kusinda" makeup.
Lo mbhalo uthi ngokuphelele izikhumba ebusweni imibimbi, nezinduna, ububomvu. Bhala ukuthi ngokuphelele ukubhekana ngokuphumelelayo ayebuthaka oily.
Kukhona amarekhodi isisekelo esekwazi ukuziphilela ubuso bakhe usuku lonke. Musa wince, hhayi nivame, olondolozela ukubukeka yayo yasekuqaleni.
Abaningi ngokwethembeka bhala ukuthi wazama ukuthola amaphutha, kodwa ababutholanga. Foundation efana kuzo zonke izimfanelo, intengo, Iphalethi yayo imibala.
A eside ziphumelela "Ballet"
Ngithanda ukubalula elinye ithuluzi iminyaka eminingi ekhiqizwa ifektri yasekhaya "Freedom". izinga Its namanje badunyiswa njengabantu kakhulu.
Abantu abaningi babhale ukuthi "kwakunguSamuweli Ballet" kwaba isisekelo sokuqala, kodwa kusukela ngaleso sikhathi zaqala ukusebenzisa ezibizayo, njengoba emashalofini ithuluzi efakazelwe cishe akazange abonakale. Manje "Ballet" futhi ithengiswe cishe zonke izitolo.
Quality abanikazi uphawu isisekelo ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe. Bhala ukuthi ukhilimu ephelele aqede akhanye, afihle ikhule ezimbotsheni. Ukugubha uhla yayo olubanzi, ikhono sithathe ithoni ngokuvumelana umbala kwesikhumba.
Kukhona amarekhodi ukuthi uvumelane ukhilimu "Ballet" futhi isikhumba esomile, ngoba ngeke uyaxebuka ekucindezelekeni. Bhala ukuthi lusebenza kalula, ngokulinganayo basakaza, akusho ibala izingubo phezu contact ngesikhumba, igcinwe kahle, ke evens ithoni.
Kulaba minuses kwaphawulwa nephunga akumnandi kakhulu, okuyinto ngokushesha ubalekela. Futhi wabhala ukuthi nakuba ukuthungwa ulula, kodwa aminyene ngokwanele, kufanele asetjenziswe ngokucophelela, ukuze singathwesi abeke imibala eminingi kakhulu.
Ngokuvamile, "Ballet" - a concealer ezinhle efihla ukungapheleli. Izibuyekezo Umthengi uqinisekise lesi.
Namuhla, sibuyekeze isilinganiso isisekelo abesifazane ethandwa kakhulu, bezwa ukuthi bazikhethele lowo ngeke fihla amaphutha kuya esiphezulu. Ngifuna ukuhlanganyela amathiphu sokusebenzisa isisekelo enze-up, zibukeke ukuma "efanele" ebusweni:
ukuba ubuso esingunxantathu noma trapezoid kakhudlwana okusaqanda, kuyafaneleka ukuthatha ukuxegiselwa base ithoni namathempeli, kwesilevu nebunzi yokufihla izindlela ithoni mnyama;
kwesokudla ukucindezeleka okusaqanda nakho kungasiza ne ngemibala mnyama, lapho lisetshenziswa endaweni izihlathi we izihlathi emathempelini;
isikwele ubuso engeli angaluboni, obangele kwesilevu nezihlathi ithoni mnyama;
round ubuso, futhi, kungaba kancane touch up, umthunzi ithoni mnyama phezu izihlathi ndawo.
Njalo ungakhohlwa emngceleni kahle umthunzi! Kungaleso sikhathi kuphela lapho isimo uyobheka bathule kahle.
Imimoya "Serge Lutens" (Serge Lutens): incazelo, intengo
Amanzi Thermal - kuyisihluthulelo ubuhle isikhumba sakho
Amalahle White: ukubuyekeza amakhasimende futhi ochwepheshe. Ingabe ngempumelelo ukuthi ilahle ezimhlophe elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, induna kanye uma isetshenziswa?
Ruslan Balbec - sezombangazwe Russian: Biography, ubuzwe, umndeni. Ruslan Ismailovich Balbec
Kungani le test kwengqondo adingekayo yokwemukela Wezangaphakathi